KMF/Cnoe : “Alefaso aloha ny fifidianana vao mifampidinika” - ewa.mg
News - KMF/Cnoe : “Alefaso aloha ny fifidianana vao mifampidinika”
“Ho anay, tsy ratsy ny fifampidinihana. Saingy tsy misy antony tokony hifampidinihana io, fa alefaso aloha ny fifidianana. Raha hifampidinika, aleo aloha vitaina ny fifidianana eny anivon’ny kaominina; avy eo, mifampidinika: ahoana amin’izay ny hitondrana ny fifidianana manomboka eo?”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe Fanabeazana olom-pirenena, Andriamalazaray Andoniaina, momba ny fanatsarana ny fanatanterahana ny fifidianana kaominaly. Raha ny tena izy, tokony ho tamin’ny 31 jolay no natao io fifidianana io. Satria tamin’ny 15 jolay 2015 ny fifidianana monisipaly sy kaominaly. Tamin’izany no efa fantatra fa efa-taona ny fe-potoam-piasana.
Na inona na inona hatao eo, tsy misy fifidianana tonga lafatra izany. Araka ny fanambarana misesisesy efa nataon’ny KMF/Cnoe, hatrany amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika no efa niresahana an’izay: tsy misy ny hala-bato, fa ny hosoka no tena misy. Tsy misy afa-tsy ao amin’ny lisitry ny mpifidy ny fomba fanaovana hosoka tena mahomby indrindra.
Mila fahazoan-dalana hikitika lisi-pifidianana ny Ceni
Tsy afa-manao hosoka izay te hanao izany, raha mandeha mifidy avokoa ny olom-pirenena tokony hifidy. “Ny olana: tsy miasa saina isika, fa rehefa vita ny fifidianana vao mimenomenona”, hoy izy. Vokany, afa-manao hosoka ny mpanao izany. Ny Ceni koa manao ny atao. Amin’izao, tsy misy lalàna mivoaka manome alalana azy hikitika lisi-pifidianana, nefa sahiny manao izany.
Raha misy ny fifampidinihana, tokony homen’ny fitondram-panjakana alalana aloha ny Ceni hahazoany mikitika ny lisitry ny mpifidy. Satria tsy ara-dalàna ny fikitikitihana ny lisitry ny mpifidy ataony amin’izao.
Nambarany koa fa misy ny tsy fahavononana hanao fifidianana, satria tsy manana kandidà ny sasany: matahotra sao tsy voafidy ny olony. Nefa tsy fanemorana fifidianana no misy amin’izao fa fahatarana. Tsy mbola misy daty hoe hanatanterahana ny fifidianana. “Raha hatao amin’ity taona ity ihany ny fifidianana, tokony ho amin’ny tapaky ny volana novambra”. hoy ihany izy. Tokony ho amin’ity tapaky ny volana ity izany ny fihaikana mpifidy.
L’article KMF/Cnoe : “Alefaso aloha ny fifidianana vao mifampidinika” a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 13/08/2019
Fodiana an-tanindrazana :: Mpandeha malagasy efapolo tafahitsoka any an-tseranan’i Paris
Lesoka noho ny tsy fahatomombanan’ny fitiliana ny tsimok’aretin’ny Covid-19 no tsy nahafahan’ireo Malagasy efapolo, mpandeha tamin’ny zotram-piaramanidina tokony hihazo an’i Madagasikara, tamin’ny faran’ny herinandro. Tafiditra tamin’ny andiana Malagasy nahazo alalana hody an-tanindrazana izy ireo, saingy izao tafahitsoka ao Paris, renivohitr’i Frantsa izao, rehefa tsy nahafeno ny fepetra napetraka taminy momba ny fitiliana. « Voatery najanona ireo olona ireo satria tsy nifanaraka tamin’ny tokony ho izy ny fitiliana natao taminy. Fitiliana atao anaty orona (PCR) no tokony ho izy fa tsy fitiliana hafa amin’ ny alalan’ny ra na « TDR” », hoy ny fanazavana nentin’ny jeneraly Andriankaja Elack, mpandrindra ny ivon-toerana fibaikoana ny ady amin’ny valanaretina Covid-19, omaly, teny Ivato, mikasika ny antony tsy nahafahan’ireo mpandeha ireo niakatra ny fiaramanidina nitodi-doha teto Madagasikara. Hisesy ny fahatongavana Tamin’ny 11 ora antoandro ny sidina voalohany nitondra an’ireo mpandeha tavela tany Eoropa nandritra ny volana maro. Nihena efapolo ny isan’ireto mpandeha ireto ka telo amby telopolo sy roanjato no tonga soa aman-tsara teny Ivato, raha toa ka telo amby fitopolo sy roanjato no nandrasana. « Miandry ny sidina manaraka ireo olona ireo ary afaka mandray ny fiaramanidina avy hatrany rehefa mivaly ka miiba ny fitiliana PCR natao taminy. Nisy koa ireo mpandeha roa amby telopolo avy any Afrika izay nigadona, omaly (ndlr; ny sabotsy teo). Nanaja tamin’ny an-tsakany sy an-davany an’ireo fepetra napetraka izy ireo », hoy ihany iry manam-boninahitra iry. Nohamafisin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Tehindrazanarivelo Djacoba kosa fa hitohy isan-kerinandro ny sidina avy any Eoropa ho tonga eto Madagasikara. « Mahatratra valopolo amby zato sy roa arivo ireo olona nisoratra anarana maniry hody eto amintsika, ka hisy ny fandaminana manokana amin’ny fampodiana azy ireo. Ny avy any Inde, ohatra, dia tokony higadona eto amintsika, amin’ny 20 aogositra izao », araka ny fanampim-panazavany. Namerenana fitiliana avokoa, tamin’ny alalan’ny “ PCR”, ireo mpandeha avy any Eoropa ireo, mialoha ny niondranany tamin’ny fiara manokana namonjy ny trano fandraisam-bahiny izay nivantanany, eo am-piandrasana ny valin’ireo fitiliana. L’article Fodiana an-tanindrazana :: Mpandeha malagasy efapolo tafahitsoka any an-tseranan’i Paris est apparu en premier sur AoRaha.
Une normalisation en train de s’effectuer
Emmanuel Macron l’a voulu. Il ne désirait pas que les relations entre la France et le Rwanda se figent à cause d’une brouille tout à fait justifiée : cette volonté de ses prédécesseurs de couvrir d’un voile les circonstances de la tragédie rwandaise et le rôle que la France aurait pu y jouer. Le chef de l’État français désirait que la vérité éclate et qu’elle permette d’établir les responsabilités de chacun dans ce drame. C’est avec cette détermination qui le caractérise qu’il a demandé à une commission d’experts d’établir un rapport sur ces événements. Les résultats de cette dernière ont permis d’apaiser les rancœurs des Rwandais et d’établir un certain apaisement dans les relations entre les deux pays. Cela a abouti à ce voyage officiel effectué en cette fin de semaine à Kigali. Une normalisation en train de s’effectuer Les relations entre les deux pays se sont totalement détendues. La preuve en avait été faite lors de la participation du président Paul Kagame au sommet économique de Paris destiné à aider les pays du continent africain fortement impactés par la crise sanitaire. Le chef de l’État avait été reçu par son homologue français en marge du sommet. Les observateurs ont remarqué les égards qu’on lui a manifestés. La suite logique est ce voyage officiel du président Macron à Kigali. Mais tout le monde attendait avec intérêt la teneur du discours qu’il allait prononcer. Certains Rwandais pensaient qu’il allait reconnaître la responsabilité de la France dans ces tragiques événements et qu’il allait présenter des excuses au nom de la France. L’allocution qu’il a faite au mémorial du génocide fut d’une haute tenue. « Je viens reconnaître nos responsabilités dans le génocide de 1994 » commence-t-il. « La France n’a pas été complice, mais elle a fait trop longtemps prévaloir le silence sur l’examen de la vérité. En voulant faire obstacle à un conflit régional, elle restait de fait aux côtés d’un régime génocidaire. Reconnaître ce passé, c’est aussi poursuivre l’œuvre de justice », a-t-il poursuivi. On sent que le passé est maintenant exorcisé. L’étape suivante que tout le monde attend est la nomination d’un ambassadeur français au Rwanda. Patrice RABE L’article Une normalisation en train de s’effectuer est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Une normalisation en train de s’effectuer a été récupéré chez Midi Madagasikara.
KITRA- FITARAZOAN-DRAHARAHA :: Noravan’ny FIFA ny Federasiona sy ny vaomieram-pifidianana
Antoandro fitery ronono. Nilatsaka, omaly hariva, ny fanapahan-kevitra avy any amin’ny Federasiona iraisam-pirenena misahana ny baolina kitra (FIFA) momba ny raharaham-pifidianana eo anivon’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Voalaza tao anatin’izany fa hapetraka ny komity manara-pitsipika vaovao, hitantana ny fifidianana sy hitantana ny fampandehanan-draharaha eo anivon’ity rafitra ity. Vokatr’ izay dia rava ny FMF sy ny vaomieram-pifidianana ka io komity manara-pitsipika io no hisahana ny andraikitra rehetra manomboka izao. Rehefa nihemotra hatrany ny fanatontonsana ny fifidianana izay ho filohan’ny FMF, teto Madagasikara, izay saika natao tany Sambava, tamin’ny 3 novambra ary mbola tsy raikitra ihany koa tamin’ny alatsinainy 5 novambra, dia nandefa tatitra tany amin’ny foibe iraisam-pirenena ireo mpanara-maso avy amin’ny FIFA sy CAF, nanatrika ny fizotran’ny raharaha rehetra teto Madagasikara. Tsy voahaja ihany koa tamin’izany ireo fepetra rehetra tokony ho narahina amin’ny fanatante­rahana ny fifidianana. Vao omaly maraina anefa, teny Isoraka, no nanapa-kevitra ireo komity mpanatanteraka eo anivon’ny FMF sy ny vaomiera misahana ny fifidianana fa “hotanterahina amin’ny 24 novambra ho avy izao, any Mahajanga, ny fifidianana”. Omaly hariva ihany dia namoaka fanambaràna ny FIFA, tao amin’ny tranonkalam-pifandraisany fa tsy maintsy hatsangana ny komity manara-pitsipika vaovao, araka ny andininy faha-14 al.1a sy ny faha-18 al.2a ao amin’ny sata mifehy ny Fede­rasiona iraisam-pirenena. “Ireto avy ny andraikitra hosahanin’ny komity manara-pitsipika: mandray ny fitantanan-draharaha mahazatra eo anivon’ny FMF; manendry ireo mpikambana eo anivon’ ny komity ao anatin’ny fivoriam-be ary mikarakara ny fifidianana”, araka ny tatitra nataon’ny FIFA. “Hanana fetr’isa araka izay ilaina ireo mpikambana eo anivon’ny komity, izay hotendren’ny iraky ny FIFA sy ny Kaonfederasiona afrikanina misahana ny baolina kitra (CAF), izay ho avy eto Madagasikara, tsy ho ela. Izy ireo no hanao izay hampalavorary sy hanara-maso ny fifidianana. Tsy misy mahazo fidiana ho filohan’ny FMF kosa ireo mpikambana mandrafitra io komity vaovao io”, araka ny voalaza hatrany. Fantatra, araka ny tatitra ihany, fa hiasa hatramin’ny 12 mey 2019 io komity vaovao io. Ankoatra an’i Madagasi­kara, dia isan’ny nampiharana fanapahan-kevitra tahaka izao ihany koa ry zareo any République Dominicaine. Naato tamin’ny maha filohan’ny FEDOFUTBOL azy, mandritra ny folo taona, mantsy Osiris Guzmán, filohan’ny federasionan’ny baolina kitra any an-toerana. L’article KITRA- FITARAZOAN-DRAHARAHA :: Noravan’ny FIFA ny Federasiona sy ny vaomieram-pifidianana est apparu en premier sur AoRaha.
Spat Toamasina: hitohy ny asa fanitarana ny seranan-tsambo
Nanomboka ny jolay 2018 ny asa fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina, tohanan’ny Fiaraha-miasa japoney (Jica). Hitohy amin’ny desambra 2020 ny asa rehetra, niato, noho ny Covid -19.Notokanan’ny filoha Rajoelina, ny 17 novambra teo, ny ivontoerana fiofanana mikasika ny sambo, Port Academy Center Toamasina (Pact), eo ambany fiahian’ny orinasa mitantana ny seranan-tsambon’i Toamasina (Spat). Foibe natao hianarana teny vahiny sy mikasika ny fitantanana ny seranan-tsambo sy ny sambo ary ny tantsambo.Tafiditra ao anatin’ny fanitarana ny seranan’i Toamasina ny fananganana ny foibe Pact. Nilaza ny tale jeneralin’ny Spat, i Avellin Christian Eddy, fa maro ny asa atao amin’izany. Eo ny asa goavana ataon’ny Fiaraha-miasa japoney ho an’ny fampandrosoana (Jica), mitentina 411 tapitrisa dolara. Eo koa ny fanitarana ny toerana hitahirizana ny entana (simenitra, vary), …. Misy koa ny fandalinana ny halalin’ny ranomasina sy fiarovana ny onja, ny fanitarana ny fotodrafitrasa fandraisana ny sambo vaventy sy ny mpizahatany. Misy amin’ny asa atao ny tetibolan’ny Spat madiodio, toy ny fiantsonan’ny sambo madinika mankany avaratr’i Toamasina, ny fanamboarana toerana malalaka hametrahana kaontenera, mirefy 5 ha, sns.Nanamarika ny masoivohon’i Japana, SEM Higushi Yoshihiro, fa hiverina hitohy ny asa rehetra, manomboka amin’ny volana desambra ho avy izao, taorian’ny fihibohana vokatry ny tranga Covid-19.Sajo sy Njaka A.L’article Spat Toamasina: hitohy ny asa fanitarana ny seranan-tsambo a été récupéré chez Newsmada.
USAID Access sy ny IMPACT: misongadina ny tohana avy amin’ny Amerikanina amin’ny covid-19
Nampahafantatra ireo tetikasa ara-pahasalamana hanaovany tohana manokana ho an’i Madagasikara, omaly, ny masoivoho amerikanina. Anisan’izany ny fanampiana teo amin’ny ady amin’ny covid-19 izay nanomezana vola efa hatramin’ny 5 tapitrisa dolara mahery.Misahana indrindra amin’ny fitaomana ny vaksiny sy ny fanaparitahana izany manerana ny Nosy ny tetikasa Impact, izay vatsin’ny USAID vola hatrany. Mandritra ny dimy taona ny faharetan’ny tetikasa. Miasa amina faritra 13 manerana ny Nosy izy ireo. Miantsehatra amin’ny ady amin’ny valanaretina tazomoka sy ny fikoloana ny fahasalaman’ny reny sy ny azy ary ny fitsinjarana vaksiny.Amin’ireo toerana saro-dalana, efa mampiasa ny teknolojia moderina ny Impact amin’ny fitaterana ny vaksiny. Ampiasaina ny Drone hitatitra ny vaksiny hahafahan’ireo olona mipetraka lavitra misitraka ny vaksiny. Ampiasaina izany any Maroantsetra, Mandritsara, Andapa ary Antalaha.Manaraka ny fepetra fitahirizana ny vaksiny ny fitaovana ampiasaina amin’izany. Afaka mandeha hatrany amin’ny 50km hatramin’ny 100km ny drone iray manao ny asa fitaterana vaksiny, hoy ny tomponandraikitra ao amin’ny Impac, Randriamanga Nathalie.Mirefy 42m3 ny toerana fitahirizam-baksiny manara-penitra ao amin’ny foibe miasahana ny famatsiana vaksiny eto Madagasikara (Depev). Mbola misy vaksiny Astrazeneca 42.661 daozy ao amin’izao fotoana ka ny faran’ny volana oktobra izao no farafitahirizana azy. 2.900 daozy kosa ny tahirim-baksiny Janssen ao anatin’izany toerana izany ka hatramin’ny faran’ny volana desambra no ho lany andro ireo. Marihina fa avy amin’ny governemanta amerikanina ny 302.750 daozy tamin’ireo vaksiny tonga teto Madagaskara.Nanamarika ny tomponandraikitra fa tsy atahorana ny hahalany ny tahirim-baksiny satria mbola maro ireo tahiry efa naparitaka manerana ny Nosy, miantoka ny fanatanterahana ny vaksiny isam-paritra.Mamatsy ara-pitaovanany USAID AccessMaromaro ny tetikasa amerikanina miantsehatra mivantana eny ifotony manatanteraka ny fandaharanasan’ny fanjakana malagasy manakaiky vahoaka. Anisan’izany ny USAID Access izay mamatsy ara-pitaovana toy ny tablette sy ny fiara mitondra ny vaksiny eny anivon’ny fiarahamonina mba hahafahan’ny rehetra misitraka izany. Manofana ireo mpiasan’ny fahasalamana eny ifotony ihany koa amin’ny fanentanana ny olona hanao vaksiny.Tsy hadino ny famatsiana ny fitaovana fiarovana ho an’ireo mpiasan’ny fahasalamana nandritra ireny valanaretina nivaivay ireny.Iandraiketan’ny USAID Access indrindra koa ny fampahafantarana amin’ny alalan’ny haino aman-jery ny fanentanana ny fanaovam-baksiny sy ny ady amin’ny valanaretina.Miantsehatra amin’ny faritra 14 manerana ny Nosy ny USAID Access, hoy ny taleny, ny dokotera Ranarison Serge. Miandraikitra ny antso 910 hahafahan’ny olona miantso maimaim-poana maka torohevitra mikasika ny tokony hatao raha misy tranga mampiahiahy koa izy ireo. Ankoatra izany ny fanofanana ireo tomponandraikitra eny ifotony. Tatiana AL’article USAID Access sy ny IMPACT: misongadina ny tohana avy amin’ny Amerikanina amin’ny covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – «Can 2019»: lasan’i Nizeria ny laharana fahatelo
Ny Voromaherin’i Nizeria no nahazo ny laharana fahatelo, ary nandrombaka ny medaly alimo, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika «Can 2019», taranja baolina kitra. Resin’i Nizeria, tamin’ny isa tery, 1 no ho 0, ny Tonizianina, ny alarobia lasa teo. Fihaonana, notanterahina tao amin’ny kianja Al-Salam Stadium Cairo.Baolina tokana, nampidirin’i Odion Ighalo, teo amin’ny minitra fahatelo monja, nanombohan’ny lalao. Niezaka nanindry sy nanao valim-panafihana avy eo ny Tonizianina, notarihin-dry Anice Badri, saingy tsy tafavoaka fa tsara fiarovan-tena ny Nizerianina. Somary henjankenjana ny fifandonana teny ambony kianja ka nisinisy ihany ny karatra mavo azon’ny ekipa roa tonta. Anisan’izany, ny azon’ilay Nizerianina, Wilfred Ndidi sy ny an’i Ghaylen Chaalei, ho an’i Tonizia. Saika mbola nahatafiditra baolina fanindroany indray ny Nizerianina, teo amin’ny minitra faha-81, saingy voatohan’i Chaouat, ny dakan’i Osimhen. Medaly alimo fanimbalony azon’i Nizeria, ity norombahiny teo amin’ny “Can” ity. Mitarika eo amin’ny famonoam-baolina, hatreto, i Odion Ighalo, izay nahatafiditra baolina 5.Mety mbola hosongonan’ilay senegaley, Mané sy ilay Alzerianina, Adam Ounas, anefa izany. Izy mirahalahy ireo izay hiatrika ny famaranana, rahampitso zoma. TompondakaL’article Kitra – «Can 2019»: lasan’i Nizeria ny laharana fahatelo a été récupéré chez Newsmada.
Fitrandrahana: hanomana ny fisokafany indray ny Tetikasa Ambatovy
Voatery niato niasa ny orinasa Ambatovy ny 6 avrily 2020, noho ny Covid-19. Na izany aza, manodidina ny 150 ny mpiasa mikojakoja ny milina ao amin’ny ozinina any Tanandava Toamasina. Etsy an-kilany, manomana ny fiverenany hisokatra indray ity orinasa mampiasa olona manodidina ny 5.000 ity ary asa tsy mivantana 3.000 ka Malagasy avokoa ny 90%. Nambaran’ny tompon’andraikitra ao amin’ity orinasa ity fa tsy nandroaka mpiasa na iray aza ny Ambatovy, amin’izao tranga Covid-19 izao fa tsy nosakanana kosa ireo nametra-pialana. Nandray antsasa-karama ireo mpiasa tera-tany malagasy naato noho izao hamehana ara-pahasalamana izao.Raha hiverina hisokatra ny orinasa, manodidina ny 3.000 taonina ny vokatra tombanany haondrana any ivelany, ao anatin’ny telo volana.Manao antso ireo tantsahaEtsy an-kilany, miantso ny fitondram-panjakana hanamora ny fiverenan’ Ambatovy hisokatra indray ireo vondron’ny tantsaha sy ny mpamokatra. Mamatsy ny orinasa izy ireo, toy ny legioma sy voankazo, ny biby fiompy, ny asa tanana, sns, izay nanatsara ny fidiram-bolany. Nisitraka izany ny tantsaha monina manamorona ny fantsombe avy any Moramanga hatrany Toamasina.“Iangavinay ny fanjakana hanamora ny fiverenan’ny orinasa hisokatra indray”, hoy i Velotody Geroges, mpamboly any Ampasamadinika, amin’ny lalam-pirenena RN 2.Sajo sy Njaka A.L’article Fitrandrahana: hanomana ny fisokafany indray ny Tetikasa Ambatovy a été récupéré chez Newsmada.
Ini Madagascar : fampifandraisana ny mpamboly sy ny mpandraharaha
Ini Madagascar, seho iray hatao eto Antananarivo, ny 8 sy 9 desambra 2021 raha tsy misy ny fiovana, fampifandraisana mivantana ny mpamboly sy ny mpandraharaha samihafa. Manome vahaolana ny IniM noho ireo harena isan-karazany mandalo fahasahiranana. Hanarenana ny seha-pihariana, miantoka ny fanaraha-maso, fanajana ny tontolo iainana, fahatezan’ny vokatra, ny tambiny ho an’ny mpamokatra sy dingana rehetra hisian’ny fampandrosoana maharitra. Ao anatin’ny fandaharam-potoana ny fihaonambe momba ny fifanakalozana ara-barotra. Betsaka ny loharanon-karena azo trandrahina ho an’ny fampandrosoana sy fa­navaozana eto Madagasikara. 15 000 karazana ny zavabo­ary manana ny maha izy azy manokana azo hahodina hahazoana vokatra isan-karazany (sakafo, fanafody, zava-pisotro …). Izay no ilàna ny fifandraisan’ny mpamboly sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy. Manomana io fotoan-dehibe io ny orinasa Festiv eto Mada­gasikara miaraka amin’ny fikambanana Valamada, mba hananana fomba fijery hafa. Hisy ho tonga eto amin’io fo­toana io ireo mpikaroka samy hafa avy any ivelany.R. MathieuL’article Ini Madagascar : fampifandraisana ny mpamboly sy ny mpandraharaha a été récupéré chez Newsmada.